Ukuhluleka Inhliziyo: kanjani ukubhekana nalesi sifo?
Kubantu abaningi, ukuhluleka kwenhliziyo ingenye izifo eziningi. Empeleni, lesi isimo imisipha inhliziyo, okuyinto eyenzeka ngenxa ithonya yezizathu ezithile futhi kuholele ubuthakathaka imisipha yenhliziyo, lapho kukhona ukuphazamiseka kwegazi wonke umzimba. Njengoba imiphumela wokuba nezifo ezinkulu njengoba yokuhlaselwa isifo senhliziyo noma isifo senhliziyo.
Ochwepheshe baxwayisa ngokuthi ukuhluleka kwenhliziyo kungenzeka efomini oyingozi noma ezingamahlalakhona. Eyokuqala senzeka elikhanyayo ngokwanele ngakho-ke sekutholakele ukuthi sine- ngokushesha, ngokuvamile phakathi nezinsuku ezimbalwa, noma ngisho amahora. Kodwa okungamahlalakhona kungakwenza khona isikhathi eside, ngaphandle kokunikeza izimpawu. Kakade engu amadala kwandisa ingozi yezinkinga ezihambisana nalesi sifo ka yisimiso senhliziyo nemithambo yegazi.
Acute inhliziyo ukwehluleka: kubangela.
Livela lobuthakathaka esivimba amanzi ngefomu acute kungenxa ukuthuthukiswa izifo ezibucayi ezifana isifo senhliziyo, ukwehluleka kwezinso futhi inhliziyo okungamahlalakhona, crisis abanomfutho wegazi ophakeme, esingamahlalakhona mitral, zenhliziyo. Kulokhu isiguli dyspnea ezinzima, futhi ngqo umoya ngokwanele eduka, futhi lapho uphinyiswa kwesifuba.
Ukwehluleka oyingozi inhliziyo: ukunakekelwa okwengeziwe.
Njalo udokotela onguchwepheshe angakwazi ukuxilonga inkinga ngaphandle nzima kakhulu. Kulokhu, isiguli kufanele ngokushesha ukuqinisekisa ukuthula, okungukuthi, wafaka isihlalo ukhululekile. Esibhedlela ukubeka i-oksijini imaski sisetshenziswa, ukuvimbela edema yamaphaphu futhi kujwayeleke emishinini yokuphefumula kanye ipayipi ezifakiwe umchamo. Lapho ukwehluleka inhliziyo sitholakale, kusebenza umuthi Furosemide futhi Izoket ngemithambo yegazi. Kufanele ukuqapha njalo izinguquko blood pressure. Uma lezi zinyathelo yayiyize, futhi akazange ulethe imiphumela kulindeleke ke edingekayo ukupholisa lokukhanda. Lapho edema yamaphaphu kungenzeka ukunqoba, usungaqala aphathe izimbangela ezaholela ukuvela yayo.
ukuhluleka Ngenhliziyo nobuthakathaka imisebenzi imisipha yenhliziyo, ezingasetshenziswa futhi kufanele walwa. Phela, asizange okwamanje kwaba nemiphumela emibi, kungenzeka ukuba zenze konke ezingakwenza ukuze zingasivimbi ukuba. Ngakho, uma uye wayibona isigqi okusheshayo kwenhliziyo, ukukhathala noma ukuba buthakathaka wonke umzimba, kanye nombala omhlophe kwesikhumba, kufanele sifune usizo lodokotela futhi ube ukwelashwa kokuvimbela.
Ngenxa yaleso sigaba sabantu abangakholelwa ukubekezelela izidakamizwa noma uzisebenzisela uma ngiphoqelekile ngempela, ungasebenzisa izakhiwo ezimangalisayo amanye amakhambi. Ngokwesibonelo, kahle ulawula umsebenzi zenhliziyo uhlelo amajingijolo, lily esigodini, foxglove mammoth, kanye inhlama, ginseng impande kanye parsley imbewu St John sika. umphumela wabo ozuzisayo emzimbeni akunakuphikwa, futhi waqaphela by odokotela abaningi. Noma yimaphi kula amakhambi kufanele ukwenziwa abanesibalo: ithisipuni elilodwa inkomishi amanzi abilisiwe afudumele anosawoti ngamunye bese uthatha omunye isipuni ngosuku. Kuphela ukuvama yokwamukela kulelo nalelo infusions ezahlukene, isibonelo, aluhlaza okwesibhakabhaka ziphele kathathu ngosuku, kodwa izimbali lily esigodini, kanye wort iSt John sika izikhathi ayibi ngaphezu kuka-2 ngosuku
Ginseng impande ifomu of tincture we-alcohol. Ukupheka ke udinga impande omisiwe uthele utshwala ake ume esingangesonto. Kungenwa kuze kube izikhathi 3 ngosuku ne kufike 15 amathonsi.
Into esemqoka ukukhumbula ukuthi impilo akunakuthengwa mali, ngakho-ke kumele avikelwe kusukela zisencane. Kuyinto kunawe, mayelana lakho ukunakekelwa kwezempilo noyedwa.
Izinga lokushisa emzimbeni okuphansi: ozinikela sokukhathazeka?
Self-ukukhiqizwa kabusha - kungcono ... self-kabusha eziphilayo
Uyini CTC emshinini? Ukubhaliswa imoto
Ukusinda Isongo:-accessory esisemqoka